काँग्रेसलाई ओलीको गोली : एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत छ ? « News24 : Premium News Channel
काँग्रेसलाई ओलीको गोली : एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत छ ?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै भिड्ने कसैको हिम्मत नभएको बताएका छन् । बुधबार (आज) बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग एक्लै भिड्ने कसैको हिम्मत नभएको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनबिना आए जुनसुकै पार्टीको जमानत जफत हुने दाबी गर्दै भने, ‘नेपाली कांग्रेसलाई म सोध्न चाहन्छु, एमालेसँग एक्लै लड्ने दम छ ?’ त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्र्सीका लागि कांग्रेसले वीपीको सिद्धान्त बिर्सिएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘कहाँ छ कांग्रेसमा वीपीको सिद्धान्त ? उसलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पायो भइहालेको छ । कांग्रेस एक्लै हिँडिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेस अहिले चार वटा बैशाखी टेकेर हिँडेको छ ।’
यसका साथै अध्यक्ष ओलीले देउवाको पंखा हम्काएर बस्ने प्रचण्डको पछाडि लागेर केही नहुने बताउदै माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई एमालेमा आउन आह्वानसमेत गरेका छन् । त्यस्तै उनले एमाले अब विवादरहित ढंगले जनताको काम गर्दै अघि बढेको पनि जिकिर गरे । अब बाँके जिल्ला एमालेको लालकिल्ला हुने पनि उनले दाबी गरे ।
त्यस्तै अहिलेको सरकारको बारेमा बोल्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार जनादेशबाट होइन, परमादेश ज्यादतिको पनि हद भएर आएको सरकारको कसरी आश गर्नुहुन्छ ? सबै भन्दा ठूलो पार्टी र प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले उम्मेद्वार हुन नपाउने भनेर अदालतले नै फैसला गर्छ । यो भन्दा तमासा अरु के हुन्छ ? तर हामी अदालतको मान बढोस् भन्ने चाहान्छौ ।’
त्यस्तै उनले एमाले कुनै जात बिशेष, धर्म बिशेष, भूगोल विशेषको मात्र प्रादेशिक पार्टी नभएको भन्दै उनले भने, ‘मेचिदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मका सम्पूर्ण जातजाति, सम्पूर्ण धर्मावलम्बी मान्ने जनताहरुको साझा राष्ट्रिय पार्टी हो ।’